चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकामा लगानीलाई सुस्त बनाउने – Annapurna Post News
चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकामा लगानीलाई सुस्त बनाउने
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on चीनले पाकिस्तान र श्रीलंकामा लगानीलाई सुस्त बनाउने
पाकिस्तान र श्रीलंकाको आर्थिक र राजनीतिक उथलपुथलले यी देशहरूमा चिनियाँ लगानीलाई प्रतिकूल असर गरेको देखिन्छ। चिनियाँ नीति निर्माताहरू स्पष्ट रूपमा आफ्नो लगानीलाई लिएर व्यापारिक र रणनीतिक दुवैको बारेमा चिन्तित थिए। चाइना ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याकर (सीजीआईटी)का अनुसार चीनले श्रीलंकामा १५ अर्ब डलर र पाकिस्तानमा ६६ अर्ब डलर लगानी गरेको छ ।
चिनियाँ BRI को प्रमुख घटक मध्ये एक, $ ४६ बिलियन चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) को परिकल्पना अनुसार २०२५सम्म पूरा हुन असम्भव CPEC परियोजनाहरु समस्याहरु को सामना गरिरहेका छन् । CPEC अन्तर्गत पूरा हुने कुल 95 परियोजनाहरूको विभाजनले विभिन्न उप-शीर्षकहरू अन्तर्गत क्षेत्रगत लगानीहरू देखाउँछ: ऊर्जा (२१), यातायात पूर्वाधार (२४), ग्वादर परियोजनाहरू (१४ =), विशेष आर्थिक क्षेत्र (९) र सामाजिक र आर्थिक विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु (२७)
स्थानीय सरकारका मुद्दाहरू र सरकारी अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार र हिनामिना बाहेक आतंकको खतराका कारण, CPEC परियोजनाहरू ढिलाइ भएका छन्। साथै, लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन। यी मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राख्दै चीनले आफ्नो पर्सलाई कडा बनाउन थालेको बताइएको छ। CPEC परियोजनाहरू पनि आर्थिक सम्भाव्यता महसुस गर्न असफल भएका छन्। ३० करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण भएको ग्वादर बन्दरगाहमा अहिले पनि पर्याप्त पानीजहाजहरु आउन बाँकी छ ।
अपेक्षाविपरीत कतार र ओमानबाट आउने तरल पेट्रोलियम ग्यास महिनामा एकपटक अनलोड भई बन्दरगाहबाट तेल ढुवानीले पर्याप्त राजस्व उठाउन सकेन । यसबाहेक, CPEC मा परियोजना कार्यान्वयन सुस्त थियो। चार शीर्षक (सामाजिक र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित आयोजना बाहेक) अन्तर्गतका ६८ आयोजनामध्ये हालसम्म १७ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्, जसमध्ये धेरै स्वीकृतिको चरणमा वा अभिप्रायपत्र जारीको पर्खाइमा छन् ।
ग्वादर बन्दरगाहमा राजस्वलाई लिएर पनि पाकिस्तानमा असन्तुष्टि थियो। फेब्रुअरी २०१७ मा, यो खुलासा भयो कि ग्वादर बन्दरगाहबाट कुल राजस्व, CPEC को भव्य गन्तव्य मानिन्छ, ९१% चीन जानेछ, जबकि यस बाट बाँकी ग्वादर बन्दरगाह प्राधिकरण (जसमा स्थानीय अधिकारीहरू सदस्य हुनेछन्) ले पाउनेछन्। यो बन्दरगाह ४० वर्षमा फैलिएको निर्माण-सञ्चालन-स्थानान्तरण मोडलमा विकास भइरहेको छ।
यस योजनाअन्तर्गत पाकिस्तानले पूर्वाधारसहित बन्दरगाह सञ्चालन र मर्मत सम्भार गर्ने तर त्यसबाट प्राप्त राजस्वको ९ प्रतिशत मात्रै राख्न सक्नेछ ।श्रीलंका अर्को दक्षिण एसियाली देश हो जुन पूर्वाधार निर्माणको चिनियाँ मोडेलको सिकार भएको छ जसले दिगो ऋणको बोझ झेलिरहेको छ। श्रीलंका सरकारले अस्थायी रूपमा $ ३५.५ बिलियन विदेशी ऋणमा डिफल्ट हुनेछ किनकि महामारी र युक्रेनमा युद्धले विदेशी लेनदारहरूलाई भुक्तानी गर्न असम्भव बनाएको छ।
श्रीलंकाको वित्त मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्ड (ISBs) मा ब्याज दर भुक्तानीमा $ ७८ मिलियन गुमाउने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । २०२२ मा श्रीलंकाको बाह्य ऋण सेवा दायित्वहरू $ ६ बिलियन अनुमान गरिएको छ, जसमा $ १ बिलियन भुक्तानी जुलाईमा बाँकी छ। श्रीलङ्काको ऋणको महत्वपूर्ण हिस्सा चीनलाई छ, अर्थात् चाइना डेभलपमेन्ट बैंक ($१ बिलियन), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना ($२.७ बिलियन) र टर्म लोन ($२.३७ बिलियन) प्रमुख आसामीहरु हुन् ।
यस वर्षको सुरुमा श्रीलंकाले चीनलाई ऋण पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गरेको थियो। त्यसयता देशको आर्थिक अवस्था झनै खस्किँदै गएको छ । डिसेम्बर २०१७ मा, श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता दायित्व पूरा गर्न असफल भयो र हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लीज अवधिको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्न बाध्य भयो, यो भाग्य पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहले पनि भोग्ने प्रवल सम्भावना छ। त्यतिबेला चीनले श्रीलंकाबाट ८ अर्ब डलर फिर्ता गर्नुपर्ने थियो । आईएमएफको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाकिस्तानको लागि सोही आंकडा झण्डै १९ अर्ब डलर थियो।
सीजीआईटीको तथ्याङ्कले चीनले श्रीलंकामा ४१ परियोजनामा १५ अर्ब डलर लगानी गरेको देखाएको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब डलर यातायात पूर्वाधारका लागि दिइएको छ । चीनलाई श्रीलंकामा लगानीमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
श्रीलंकाले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्न थालेको छ भने पाकिस्तानले चीनलाई ऋण तिर्न ढिलाइ गर्न थालेको छ। पाकिस्तानले चिनियाँ बैंकहरुको ऋणको ब्याज घटाउन पनि आग्रह गरेको छ । यसले चिनियाँ कोष प्रबन्धकहरूलाई उनीहरूको अपेक्षालाई घटाउन र बीआरआई अन्तर्गत सम्पूर्ण खर्चलाई पुनर्विचार गर्न भनेको छ। CPEC को सर्त र सर्तहरू पुन:विचार गर्नु बाहेक IMF आफ्नो खर्चमा कडाई र राजस्व वृद्धि नगरेसम्म पाकिस्तानलाई थप ऋण जारी गर्न अनिच्छुक छ।
क्याल्सियमको कमी हुँदा शरीरमा कस्ता लक्षण देखा पर्छ ?
पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अभिव्यक्तिपछि गण्डकीमा तरंग, सम्भव छ एमालेको सरकार ?
को हुन् पुटिनले भित्र्याएका सेनाका नयाँ कमान्डर ? जो शत्रु हराउन बलात्कार, देखि रासायनिक हमला जस्ता क्रुर अस्त्र प्रयोग गर्छन् !